Guri - Liisankayga Wadayaasha
Iibso Dukumiintiyada dhabta ah ee khadka tooska ah
Liisanka Darawalnimada ee khadka tooska ah
Baasaboor Real / Fake ah
Kaararka Aqoonsiga dhabta ah / Fake
Dalbo Express VISA
IELTS, TOEFL, LUGAHA LUGAHA
Cinwaannada Sharciga / Fake ee Dhulka
Bayaanka Bangiga oo tifaftiran
Shahaadooyinka Dugsiga & Dibloomooyinka
Liisanka Darawalnimada ee Diiwaangashan oo aan Imtixaanno lahayn
Dalbo Liisanka Darawalnimada
Ogolaanshaha Wadista Caalamiga (IDP)
Muuji Qiimaha Liisanka Darawalnimada
Shatiga Wadista ku meel gaarka ah
Cusboonaysi, Beddel Liisankaaga Darawalnimo
Iibso Baasaboor Labaad
Dalbo Baasaboor Diblomaasiyadeed
Kaarka Cagaaran ee Mareykanka ee khadka tooska ah
Baasaboorka Real Express Online
Codso Baasaboor Online ah
Qaybaha DL A, B, C
Sida Loo Dalbo Onlineka
Iibso Liisanka Darawalnimada Khadka Tooska ah
Halkee laga dalban karaa shatiga darawalnimada ee Yurub dhexdeeda Ma waxaad joogtaa Jarmalka, ama mid kasta…
Iibso Ogolaanshaha Deganaanshaha Khadka Tooska ah
Iibso Ogolaansho Deganaansho oo ansax ah Online oo ku nool Yurub, Ameerika, Kanada MDL, waxaad…
Iibso Baasaboorka Real Express Online
Express Baasaboor Canadian Online iib ah Hel baasaboor Canadian sax ah oo dhab ah oo sax ah oo leh biometric…
Sida Loo Bixiyo Dukumintiyada
Ku bixi dukumentiyada adoo isticmaalaya Bitcoin Ma la socotaa Bitcoin? Waa crypto-ka ugu kalsoonida badan…
Ku iibso dukumeenti Express Online Online
Ma rabtaa dukumeenti onlayn ah oo aad u baahan tahay si degdeg ah? Raadinta waa in la dhammeeyaa! Halkan MDL, waxaanu ku soo saarnay dukumeentigaaga mid asal ah ama mid been abuur ah muddo aad u gaaban gudaheed. Waxaan nahay kuwa ugu fiican marka aan bixinno dariiq cad oo lagu helo dukumeenti aan la marin habraac iyo hab-maamuus dheer. maxaad sugaysaa
Dalbo Baasaboorrada Diiwaangashan
Waxaan soo saareynaa baasaboorada in ka badan 120 wadan. Diiradayada ugu weyn waa Yurub, USA & Kanada. Waad eegi kartaa!
Iibso database-ka diiwaan gashan shatiga darawalnimada
Halkan, waxaad ka dalban kartaa shatiga darawalnimada dhabta ah adigoon wax imtixaan ah qaadin. Wax soo saarku waxay caadi ahaan qaadataa 3-5 maalmood oo shaqo!
Ka baadh shatiyadayada darawalnimada
Dalbo shatiga darawalnimada imtixaan la'aan 2022
Miyaad ka daashay qaadashada imtixaanada wadista iyo imtixaanada weli ma guulaysan? Ma taqaana sida loo kaxeeyo laakiin ma lahan liisanka darawalnimada? Haddii aad raadinayso meesha aad ka iibsanayso liisanka darawalnimada onlayn markaa waa kan. Waxaan nahay koox xirfadlayaal IT ah oo ku hela liisanka darawalnimada dhabta ah 3-5 maalmood oo shaqo gudahood. Waxaad bedeli kartaa liisankaaga waddaniga ah, halkan ayaad ku cusboonaysiin kartaa liisankaaga. Waxaan nahay kuwa ugu fiican. maxaad sugaysaa Order hadda
Iibso Baasaboorka Safarka ee Diiwaangashan
Ma tahay taageere socdaalka? Magangalyo doon? Waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad sameyso waa inaad ka iibsato baasaboor dhab ah oo internetka ah halkan. Waxaan ku soo saareynaa baasaboorkaaga 5-6 maalmood oo shaqo gudahood. Waxay ka diiwaan gashan tahay kaydadka xogta dawladda. Haddii aad u baahan tahay baasaboor been abuur ah, waxaan kugu heli doonaa qiimo jaban. Dukumeentiga baasaboorka been abuurka ah kuma diiwaan gashanayn kaydka macluumaadka. Waxaan soo saareynaa baasaboorka dhammaan wadamada aduunka marka laga reebo Bolivia. Dalbo hadda.
Kaarka aqoonsiga oo iib ah
Ma tahay qof da'da ka yar oo aad u baahan tahay inaad booqato naadiyada habeenkii ama casinos? Waxaan taas ka dhigi karnaa halkan innagoo ku helina Kaararka aqoonsiga oo aad loo sawiran karo. Ma rabto in laguu aqoonsado dambiile gudaha dalkaaga, miyaad tahay? Iibso kaararka aqoonsiga US, EU iyo UK online halkan oo lacag kaydso. Kaarka aqoonsiga waxa lagu soo saaray oo la diiwaan geliyay saddex maalmood gudahood. Waxaa si toos ah albaabkaaga loogu keenayaa DHL, UPS, EMS. Dalbo hadda
Qiimaha Shahaadooyinka NCLEX 2022
Dhab ahaantii waxaad dooneysaa inaad noqoto kalkaaliye ama shaqaale caafimaad gudaha Mareykanka markaa adduunka oo dhan, sax? Waxaad wakhtiga ku badbaadin kartaa halkan codsashada iyo ka dalbashada shahaadooyinka NCLEX MDL. Waxaan ku helnaa shahaadada 2-3 maalmood oo shaqo gudahood. Qiimaha aasaasiga ah ee qaadashada mid ka mid ah imtixaanada NCLEX waa $200 haddii aad ka raadinayso liisan gudaha Mareykanka Iyadoo ku xiran meesha aad ku nooshahay, guddiga kalkaalinta gobolkaaga ayaa laga yaabaa inuu u baahdo kharashyo diiwaangelin dheeraad ah. Laakiin halkan, waxaanu ku helnaa si ka dhakhso badan sidii caadiga ahayd mana aad wax imtixaan ah qaadin markaa qiimaha sarreeya. Dalbo hadda
Iibso ogolaanshaha joogitaanka onlayn
Dhalashada waxaa lagu dammaanad qaaday halkan MDL. Ma doonaysaa in aad online ka iibsato ogolaanshaha joogitaanka? Waqtiga iyo goobta saxda ah. Halkan, waxaan ku helnaa sharci degenaansho 3-4 maalmood oo shaqo gudahood. Ogolaanshahan joogitaanka ee aan soo saarno waa qiimo macquul ah. Waxaan sidoo kale ku siinnaa ogolaansho shaqo haddii aad rabto inaad dibadda ka shaqeyso. Xor ayaad u tahay inaad ku noolaato US, EU, UK, Australia iyo qaarad kasta oo aad doorato wax yar ka dib hal usbuuc kadib markaad nala soo xidhiidho. Maxaa diidaya la xiriir hada oo hel sharci degenaansho
Dalbo dhammaan dhokumantiyada 3 maalmood gudahood
MDL, waxaanu soo saara alaabo iyo adeegyo aad u balaadhan. Dhawr ayaan magacownay. Qaar dukumiintiyo kale waxaan soo saareynaa waa;
Bayaanka Bankiga, Shahaadooyinka Caafimaadka, SSN, IELTS & TOEFL, Magacyada Dhulka, Shahaadooyinka Dugsiga & Shahaadooyinka iwm
Dhammaan dukumeentiyadan aan soo sheegnay halkan ayaa laga heli karaa. Waxaan hubineynaa inaan ku helno sida ugu wanaagsan marka aad naga dalbato Shahaadooyinka. Dalbo hadda
Waxa macaamiisheena qaarkood ay ka yiraahdeen Adeegyada Dukumeentiyada
Waxaan ku dhacay dhowr imtixaan oo darawalnimo. Tani waxay ahayd markii ugu horeysay ee aan codsado shatiga darawalnimada Jarmalka dhabta ah iyo baasaboor MDL ah. Waxay ahayd mid aad u fudud oo ay nagala shaqeeyeen inaan si dhakhso ah u xalinno wixii dhibaato ah, xitaa dukumentiyada maqan ama kuwa khaldan, waxaanan helnay baasaboorka iyo ruqsadda darawalnimada markii ballanta. Adeegyo aad u degdeg badan Guys. Aad u faraxsan !!! Jurgen Neuer D. Augsburg, Germany
Jurgen Neuer D.Tabor
Marka hore waxaan u maleeyay inay tahay khiyaano. Wax walba waxay u dhaceen si degdeg ah. Mar meel kale ayaa la igu khiyaameeyay 5,000 oo Yuuro. Waxaan markaas go'aansaday inaan isku dayo ugu dambeeya MDL. Samada wanaagsan, waxay ku soo saareen liisanka darawalnimada Iswidhan 3 maalmood gudahood. Markii dambe waxaan aaday xafiiska Transportstyrelsen si aan u hubiyo waana la diiwangeliyay! Sixir oo kale!!! Maanta ninkeyga iyo wiilkeyga ayaa ugu dambeyntii halkan ka helay baasaboor Iswidhish ah iyo liisanka darawalnimada Romania. Mahadsanid nimanyahow! Habsiin!!!
Hello, Fadlan isku day inaad aad u dheereyso marka xigta. Waxaan idinka dalbaday ogolaanshaha joogitaanka Kanadiyaanka- Green Card iyo shahaado dhuleed idinka. Sida muuqata, waxaad qaadatay wax ka badan intii la filayay. Waan ku faraxsanahay in kastoo aan helay dukumentiyadayda. Sii wad shaqada wanaagsan!
Kaliya waxaan rabaa inaan dhaho waad mahadsan tihiin. Hadda waxaan ahay muwaadin buuxa oo EU ah. Hadda waxaan haystaa Baasaboorka Midowga Yurub (Belgium), Shahaadada Dhalashada, Kaarka Aqoonsiga iyo Shatiga Darawalnimada. Waxaa laga yaabaa inaan kaaga baahdo dukumeenti kale. Markaa hubaal mar labaad ayaan kula soo xidhiidhi doonaa. Aad baad u mahadsantahay. Rita G. Brussels, BG.
Rita G.Naag ganacsato ah
Waxa aan raadiyay halka aan ka helayo shatiga duulista iyo shatiga Doonta ee internetka waxba iima taran. Mahad waxaa leh MDL oo ah kuwa keliya ee bixiya adeegyadan. Way cajiib yihiin! Hadda waxaan isticmaalaa shatiga duuliyaha gaarka ah ee aan halkan ku helay si xor ah. Waxaan ku siin doonaa qiimeynta 4.5 xiddigle! Kuuma wada siin karo 5 in kastoo...hahahaha!
Jim MorenoDuuliyaha Gaarka ah
Xaqiijinta Xogta & Amniga
Dukumeentiyadayada asalka ah si adag ayaa loo tijaabiyay waana la xaqiijiyay. Si kastaba ha ahaatee, qof kastaa wuu xaqiijin karaa dukumeentiga isagoo isticmaalaya mareegaha dawladda oo gelinaya lambarka teleefoonka ama saxanka xaqiijinta kaas oo loogu talagalay dukumeenti kasta. waxaanu ku hagaynaa sida loo sameeyo kuwaas oo dhan marka aad naga dalbanayso dukumeentiyada.
Qarsoonaanta Xogta Macmiilka: Xogtaadu aad bay noo ammaan tahay. Meelna daaha ka qaadi mayno ogolaanshahaaga la'aanteed. Markaa macmiilkayaga ah markaad naga iibsanayso dukumeenti asalka ah ama been abuurka ah, waad nabad qabtaa!
Agabkayada Casriga ah:
Waxaan xiriir adag la leenahay wakiilada dawladda kuwaas oo na siiya agabka ugu wanaagsan ee loo baahan yahay soo saarista dukumentiyada dhabta ah. Waxaan isticmaalnaa walxo tayo sare leh sida waraaqo gaar ah, daabacaad intaglio, daabacaad yar, iyo midabyo fluorescent ah kuwaas oo aan lagu arki karin indhaha qaawan iyo qaar ka mid ah mishiinada tijaabada sidoo kale. Si kastaba ha ahaatee, kuma talineyno dukumeentiyada been abuurka ah waxaana kula talisay macaamiisheena inay raadiyaan dukumeenti dhab ah, baasabooro, aqoonsi, iwm kuwaas oo sidoo kale laga heli karo wadamada kale.
Dukumentiyada la sawiran karo:
Dukumeentiyadayada dhabta ah waxaa la soo saaray iyadoo la isticmaalayo wax walba si casri ah; ma jirto meel ay ku fashilanto. Dukumeentiyadayada dhabta ah waxay leeyihiin dhammaan calamadaha amniga muhiimka ah kuwaas oo u oggolaanaya inay ka gudubto dhammaan heerarka baaritaanka iyo xaqiijinta
Diiwaangelinta Xogta Biometric:
Marka aad naga dalbato baasabooro, fiisaha ama dukumeentiyada kale, waxaan kugu boorineynaa inaad keento waxyaabaha soo socda: Waxaan isticmaalnaa aqoonsigaaga gaarka ah oo ay ku jiraan sawirka faraha, joomatari gacanta, joomatari dhegta, qaabka retina iyo iris, mowjadaha codka, DNA iyo saxiixa iyo isku mid oo la cusbooneysiiyay database dawladda. Markaa, haddii loo baahdo, macluumaadkaaga biometric waxaa laga heli karaa meel kasta iyadoo la isticmaalayo nidaamka xogta dawladda. Haddii aad hayso xog is-khilaafsan ama diiwaan-xumo, khubaradayadu waxay ku beddeli karaan mid cusub oo ay ku sixi karaan indhaha dawladda.
Digniin!!! Iska jir khayaanada iyo wax isdaba marinta!
Waxaa jira dokumeentiyo badan oo been abuur ah oo laga heli karo internetka kuwaas oo kaliya bixiya dukumeenti raqiis ah oo been abuur ah kuwaas oo loo ekeysiiyay mid dhab ah. Ka digtoonow markaad dukumentiyada ka iibsanayso internetka sababtoo ah qaladkaaga wuxuu kuu keeni karaa dhibaato weyn. Laakiin annaga, gabi ahaanba waad nabdoon tahay. Waxaan hubineynaa in dhammaan dukumeentiyada dhabta ah ay yihiin 100% dhab ah oo ka diiwaangashan kaydka xogta dawladda oo buuxinaya dhammaan heerarka rasmiga ah ee gobolka. Marka laga reebo tan, waxaan sidoo kale hubineynaa in macluumaadkaagu uu nagu dhex jiro dhowr lakab oo ammaan iyo sir ah. Waad hubin kartaa waxayaga macaamiishu ku qanceen waxay yidhaahdaan nagu saabsan. Waxaad ballan bilaash ah la samayn kartaa la-taliyayaashayada khubarada ah si ay kaaga caawiyaan xallinta dhibaatooyinkaaga. MDL waa meesha ugu fiican adiga!
Siyaasadda Soo Celinta: Xaalad kasta oo ah dukumeenti aan la keenin ama dhibaatooyin kale, 99.00% Lacagtaada waxaa laguugu soo celiyaa isla habka lacag bixinta!
Dammaanadda dib u celinta lacagta 99%
Ku qanacsanaanta macaamilka 97%
Tirooyinkayada wax soo saarka
Ku Qanacsan Macaamiisha
Dukumeentiyada la soo saaro bishii
Wadarta dukumentiyada la soo saaray
Laga soo bilaabo Blog-keena
Iibso Liisanka Doomaha ee Florida & London
Ka dalbo Liisanka Pilot-Shaqaale Badan-MPL Yurub
Ruqsadda Awoodda Duuliyaha Gaarka ah ee PPL iib ah
Sida loo iibsado Laysanka Duuliyaha Ganacsiga-CPL khadka tooska ah
Halkan nala soo xiriir si aad u dalbato dukumintiyadaada
Taleefanka hore: +49 1521... *
Iibso Ruqsadda Darawalnimada EU
Iibso Shatiga Wadista UK
Iibso Ruqsadda Darawalnimada Mareykanka
Ruqsadaha Kale ee Darawalnimo
U tarjun luqadaada
Xuquuqda daabacaadda @MyDriversLicence. Dhammaan Xuquuqaha Way Dhawrsan Yihiin.
Fariin noogu soo dir WhatsApp halkan
Sideen kuu caawin karnaa fadlan?